यौन क्षमता बढाउने कोशिस यसरी हुन सक्दछ घातक, यसरी अपनाउनुस सावधानी | Rajmarga
बेलायतका केही औषधि पसलमा पुरुष अब बिना डाक्टर सल्लाह भियग्रा किन्न सक्दछन्। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुका अनुसार यसबाट त्यस्ता पुरुषलाई लाभ पुग्नेछ, जसमा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन छ।
एक अनुमानका अनुसार बेलायतमा पाँचमध्ये एक पुरुषमा यो समस्या छ। अन्य औषधिजस्तै यसको बिना कारण प्रयोगको खतरनाक परिणाम हुन सक्दछ। भारत, नेपालजस्ता देशमा जहाँ यौनका विषयमा खुलेरकुरासमेत गरिँदैन, यसको प्रयोग बिना सोचविचार हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
विशेषगरी युवाहरु आफ्नो पुरुषार्थ बढाउन, लामो समयसम्म आनन्द लिन र आफ्नो पार्टनरसामु लज्जाबोध नहोस् भन्ने डरले भियग्राको प्रयोग चिकित्सकको सल्लाहबिना प्रयोग गर्दछन् । यदि तपाई नीलो चक्कीको प्रयोग बिना सोचविचार गरिरहनु भएको छ भयो यो कुरा बुझिराख्नुस्ः
कसले यसको प्रयोग गर्ने ?
भियग्रा त्यस्ता पुरुषले मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ, जसलाई अपुंशकतासम्बन्धी समस्या छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई थोरै मेहनत गर्दा छातीमा पीडा हुन्छ, र स्वासको गति तिब्र हुन्छ, उनीहरुले भियग्रा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
साइकियाट्रिस्ट एण्ड सेक्सुअल डिसअर्डर विशेषज्ञ डाक्टर प्रवीण त्रिपाडीले भियग्राको प्रयोग चिकित्सकको सल्लाहबिना गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार कहिलेकाँहि यसको साइड इफेक्ट जीवनभरका लागि हुन सक्दछ।
डाक्टर त्रिपाठीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने कि उनकोमा धेरै विरामी आउने गरेका छन्, जो यसमा बानी परेका छन्।
उनले भने–मैले यस्ता धेरै युवाहरु देखेको छु, जसलाई यसको बानी परेको छ। यसले मानिसको सोच र आत्मविश्वासलाई प्रभावित पार्दछ । अधिकांश युवा आफ्नो पार्टनरका सामु लाज नहोस् भन्ने डरले भियग्रा प्रयोग गरिरहेका छन्।
डा. प्रवीण भन्छन्–भियग्रा एउटा सुरक्षित औषधि होइन, यसका साइड इफेक्ट पनि हुन्छन् । कहिलेकाँहि यसको साइड इफेक्ट निकै खतरनाक हुन्छ ।
उनले अगाडि भने–यसको प्रयोगबाट मानिस सधैंका लागि अन्धो पनि हुन सक्छ । मानिसहरु यो कुरा जान्दै जान्दैनन् ।
‘कहिलोकाँहि यसको प्रयोगबाट इरेक्शन लामो समय रहन्छ, जुन उचित होइन । यस्तोमा यो पनि सम्भव छ कि इरेक्शनसम्बन्धी यो समस्या जीवनभरका लागि रहन सक्छ ।
केही कमन साइड–इफेक्ट
–आँखाको हेर्ने क्षमतामा कमी
–नाक बन्द हुनु
यदि तपाईलाई यस्तो समस्या आए तत्काल चिकित्सकको सल्लाह लिनु जरुरी छः
–छातीमा पीडा हुनु
–स्वासको समस्या, उकुशमुकुश, अनुहारमा सुजन
यस्ता समस्या भए कहिल्यै प्रयोग नै नगर्नुस्
जुन मानिसमा छातीमा पीडाको समस्या रहने गरेको छ, उनीहरुले भियग्राको प्रयोग नगर्नु उचित हुनेछ । एचआइभीका रोगीले यदि रिटोनविर नामको औषधि सेवन गरिरहेका छन् भने पनि भियग्राको प्रयोग नगर्नु राम्रो हुनेछ।
डाक्टर प्रवीण भन्छन्–यदि तपाईलाई हृदयघात वा फेरि स्ट्रोक भइसकेको छ भने भियग्राको प्रयोग खरतनाक सावित हुन सक्दछ।
‘यदि तपाई उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेको भएको छ वा मधुमेह पीडित हुनुहुन्छ भने पनि यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन । किड्नीमा समस्या छ भने त चिकित्सकको सल्लाहबिना यसको प्रयोग गर्नै हुँदैन । मलाई यस्ता घटना पनि थाहा छ, जसमा केही मिनेटको आनन्दका लागि यसको प्रयोग गरियो र उनीहरुले आफ्नो ज्यानै गुमाए ।’
चिकित्सकको सल्लाहबिना किन्न सकिन्छ ?
डा. त्रिपाठीका अनुसार उनको जानकारीमा आएसम्म भियग्रा भारतमा डाक्टरको सिफारिसबिना किन्न सकिन्न । भारतमा यो १०० रुपैयादेखि हजार रुपैयाँसम्ममा उपलव्ध छ। अन्य देशको मुलनामा भारतमा भियग्रा सस्तो छ।
बेलायतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ भियग्राको चार चक्कीको एउटा प्याकेटको १८३३ रुपैयाँ पर्दछ । बेलायतमा यो औषधि पसलमा किन्न सकिन्छ । फार्मासिस्ट यो औषधि दिनुअघि यो कुराको जाँच गर्दछन् कि किन्ने व्यक्तिले यो प्रयोग गर्न सक्दछ कि छैन।
यसले कसरी गर्छ काम ?
कयौ मामिलामा भियग्राले काम गर्दछ । त यसले सबैमा असर गर्दछ यो भने जरुरी छैन । डाक्टर प्रवीण भन्छन् कि भियग्राले शरीरमा नाइट्रिक ओक्साइडको मात्रा बढाइदिन्छ । यसले हाम्रो नशालाई मोटो बनाइदिन्छ ।
भियग्रा सेवन गरेपछि शरीरमा रक्तसंचार बढ्छ र यसले लिंगको तनावमा सहयोग गर्दछ ।
भियग्राको प्रयोग कसरी र कहिले गर्ने ?
भियग्राको प्रयोग खाना खाएपछि वा नखाइकन गर्न सकिन् छ। यदि तपाईले पेटभरी खाना खानु भएको छ भने यसले असर देखाउन केही समय लगाउनेछ ।
भियग्राको सेवन यौन सम्बन्ध कायम गर्नुभन्दा एक घण्टा पहिला गर्नुपर्छ । यसलाई अंगुर वा अंगुरको जुसका साथ सेवन गर्नु राम्रो हुनेछ । किनभने यसले औषधिको असर कम गर्दछ ।
बढी नै असर गरे के गर्ने ?
यदि भियग्रा बढी नै असरदार सावित भइरहेको छ भने डाक्टरको सल्लाह लिनु आवश्यक छ । बेलायतमा केही पुरुषले यो गुनासो गरेका छन् कि यसको प्रयोगपछि उनीहरुको लिंगमा तनाव चार घण्टाभन्दा अधिक र पीडादायी रह्यो ।
डाक्टर प्रवीणकोमा पनि यस्ता घटना आएका थिए । त्यसैले उनी भन्छन्–यो जरुरी छैन कि यस्तो हरेक व्यक्तिका साथ हुन्छ, यदि यस्तो समस्या आएको खण्डमा चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नु जरुरी छ।
यदि तपाई भियग्रा अनलाइनमा किन्दै हुनुहुन्छ भने यो निश्चित गर्नुस् कि अनलाइन कम्पनी सही छ कि छैन । हुन सक्दछ कि तपाईलाई भियग्राको नाममा गला औषधि त दिँइदै छैन ।
कुनै पनि वेभसाइटमा क्रेडिट वा डेबट कार्ड प्रयोग गर्दा पनि सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। बीबीसी हिन्दी
Previous post: यसरी मनाइयो विश्व सामाजिक कार्य दिवस
Next post: जेठाजु र बुहारीलाई वडा कार्यालयमै निर्घात कुटपिट